Tany Romanor (Soa) : Miverina ho fananan’ny Fanjakana -
AccueilSongandinaTany Romanor (Soa) : Miverina ho fananan’ny Fanjakana
Tany Romanor (Soa) : Miverina ho fananan’ny Fanjakana
Araka ny antotan-taratasy mirakitra ny tany Romanor na koa hoe “Soa”, ny orinasa Codal no tompony, avy eo lasan’ny orinasa Centrale Laitière de Tananarive. Araka ny didim-pitondrana lah.2009-073, ny 14 janoary 2009, lasa tanim-panjakana sy fananam-panjakana io tany io. Ny 5 febroary 2009 anefa, araka ny fifanarahana ara-barotra fa Rakotomanga Jean Marie no voalaza fa tompony sy nividy io tany Romanor na “Soa” io. Tsy iza anefa izany fa olona akaiky an’ingahy Marc Ravalomanana ihany. Raha ny marina, ny minisitry ny Fanajariana ny Tany tamin’ny fitondran-dRavalomanana, Ratolojanahary Marius, no nanao sy nikarakara ny famindrana izany tamin-dRakotomanga Jean Marie. Noho izay indrindra, hita ary tsapa fa kolikoly avo lenta sy barofo no nahazoan-dRavalomanana ny tany.
Tsy nanaiky izany anefa ny Fanjakana, ary namoaka didy hitsivolana lah.30 539/2001, ny 17 oktobra 2011, nanafoana izany fifanarahana ara-barotra, ny 5 febroary 2009, ary niroso tamin’ny famotehana sy fandrodanana ny fotodrafitrasa nitsangana tao. Noho izany, dia nosoratana tamin’ny Fanjakana malagasy ny tany. Nanao fitarainana teny amin’ny Fitsarana avy hatrany anefa Rakotomanga Jean Marie, solontenan’ingahy Marc Ravalomanana, nividy ny tany, amin’ny fampitsaharana ny fandrodanana nataon’ny Fanjakana. Nanao fampiakarana anefa ity farany, saingy nolavin’ny Fitsarana izany.
Noho izany indrindra, hita fa misy tsy mazava mihitsy ary tena manjavozavo mihitsy ny mikasika ny dosie momba ity tany Romanor ity teny amin’ny Fitsarana. Satria nanomboka ny taona 2012, tsy nanao fitarainana mahakasika izany intsony mihitsy ilay voatondro fa nividy ny tany. Aty amin’ny taona 2017 izy ireo vao milaza fa azy ireo mazava sy ara-dalàna ny tany. Nandritra io fotoana lavabe nanomboka ny 2012 io anefa tsy nanao fitarainana mahakasika izany izy ireo. Araka izany, efa dila ny fotoana tokony hanaovana fitarainana, ka mijanona ho fananan’ny Fanjakana ny tany. Noho izay indrindra no namoahan’ny Fanjakana didy hitsivolana amin’ny fampiatoana ny asa rehetra amin’ny fananganana, satria efa misoratra amin’ny Fanjakana malagasy ny tany “Soa” na Romanor teo aloha fa tsy an-dRakotomanga Jean Marie intsony. Ny fitsarana rahateo nanambara tamin’ny alalan’ny “certificate de non recours”, fa tsy nisy fitarainana mahakasika io tany io voatahiry velively teny amin’ny tribonaly.